Our Approach -PICMO cdmo mpanamboatra
Ny famokarana manokana sy ny fomba amam-panao manokana, dia afaka manampy ny mpahay siansa hanaparitaka ny fikarakarana R & D ao amin'ny sehatry ny simika sy fanafody.
APICMO dia nanome ho an'ny mpanjifa ICH amin'ny API avo lenta avo sy ambany. Ny vokatra nomen'ny APICMO ao amin'ny orinasa famokarana an'i China dia efa nosedraina tanteraka talohan'ny fandefasana azy mba hanamarinana ny vokatra vokatra. Ity serivisy ity dia miantoka fa ny mpanjifa APICMO dia mahazo vokatra tsara amin'ny fotoana rehetra.
APICMO dia manolo-tena hanaja ny fanomezam-boninahitra avy amin'ny indostria pharmaceutique entina hanamafisana fa ny tolotra sy ny vokatra rehetra dia fifankatiavana ara-tontolo iainana.
APICMO dia ISO 9001: Certificat de 2008 ary ny hetsika ara-barotra rehetra dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fitantanana.
Amin'ny sehatry ny fikambanana R & D tanteraka any Shanghai, ny laboratoara samihafa 5 miaraka amin'ny oniversite, ny famokarana 2 ao Henan sy Jiangsu, ary ny tambajotra mpamatsy angovo any Shina, ny sehatry ny sehatry ny APICMO dia manamafy ny fampandrosoana sy ny famokarana heterocyclic compounds (toy ny piperidines, piperazines, pyrrolidine ...), ny spiro, ny asidra boronany, ny benzenes, ny amino asidra sy ny peptides, ny singa chiral, ny inhibitors, ny nucleosides & ny nucleotides, ny APIs, sns.